Wiase Nsɛm | Nyan! June 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Efi January kosi September, afe 2013 no, awaregyae huruw kɔɔ soro paa wɔ Beijing kuro no mu. Wode toto afe 2012 deɛ ho a, na ɛkyerɛ sɛ awaregyae kɔɔ soro ɔha mu nkyɛm 41. Animdefo kyerɛ mu sɛ, deɛ ɛkɔfaa eyi bae ne ɛtow ho asɛm bi a abɛtɔ ɔman no mu nnansa yi. Sɛ awarefo tɔn wɔn fie a, sika no mu ɔha mu nkyɛm 20 kɔ aban hɔ. Nanso sɛ wɔagyae aware na wɔpɛ sɛ wɔtɔn fie foforo a, ɛtɔ da a wonnye wɔn saa tow no.
Amanaman Nkabom no de ato gua sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, anka amanfoɔ nwe mmoawammoawa te sɛ mmɛbɛ, asisirapɛ ne deɛ ɛkeka ho. Ɛno bɛma wɔanya nnuanennuro a ɛfata. Nneɛma a nnipa ntumi nni no, mmoawammoawa no tumi di, na nnipa nso awe mmoawammoawa no. Amanneɛbɔ bi a wɔde too gua nnansa yi kae sɛ yebetumi de mmoawammoawa “ayɛ yɛn nam.” Nanso amanneɛbɔ no san kae sɛ “ɛnyɛ ebinom akɔnnɔ sɛ wɔbɛwe saa mmoawammoawa no.”
Ayaresabea a wɔyɛ awoɔ aduro no, wɔagyegye mmadwoa ne mmarima ho nsuo afra ama nkwa aba mu; ɛhyehyɛ frigye mu nanso wonhu ne “wuranom.” Agya wɔn adwennwene efisɛ, ɛyɛ wɔn yaw sɛ wɔbɛto agu, na wɔto gu a, wobetumi anya asɛm. Ayaresabea bi deɛ, wɔkyerɛ sɛ mmadwoa a ɛte saa 1,000 na abedi wɔn hɔ. Wonhu ne wuranom “akyiri akwan.”
Bere bi a atwam no, na Katolekfo a wɔwɔ Ireland tumi ware asɔredan mu anaa aban mu. Efi 2013 reba yi deɛ ebinom tumi ware aban mu ma wɔn a wɔmpɛ nyamesom hyira aware no so ma wɔn. Sɛnea Reuters amanneɛbɔ bi kyerɛ no, sɛ “nkurɔfo bebree ware aban mu wie a, wɔpɛ sɛ obi nhyira so nanso wɔmpɛ sɛ wɔkɔ asɔredan mu.” Ɛde adwuma pii abrɛ kuw a wɔmpɛ nyamesom no.
Wiase Nsɛm—June 2014